KEESHOND DOG MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA - EEYAHA
Keeshond Dog Macluumaadka iyo Sawirada
'Kani waa sawirka 5-jirkeyga Keeshond, Remy. Wuxuu jecel yahay inuu ciyaaro ciyaar, dabaasho iyo inuu sii socdo socod dheer . Wuxuu jecel yahay inuu la joogo dadka iyo eeyaha kale. Iyagu way ugu faraxsan yihiin sida eeyaha gudahooda oo ma jecla inay ka dheeraadaan milkiilayaashooda muddo dheer. Mine way fiicantahay inta lagu jiro maalmaha shaqada laakiin waan necbahay in layga reebo waxkasta oo ficil ah hadaan guriga joogo. Ma ahan wax weyn aniga oo leh carruurta yaryar sidiisa oo kale ku boodaa iyaga laakiin lama korin hareerahooda, weligoodna ma uusan la qaadan wax ka badan daqiiqado iyaga la ah. Carruurta ka weyn 5 sano, aad buu u dhaqan fiican yahay. '
Waxay yihiin caqli badan, damac adag, iyo eeyo madax adag laakiin haddii aad tababbarka uga dhigto madadaalo iyaga oo aad raacdo talada eeyaha eyda, badiyaa waxay ku baran karaan xeelad ama amar daqiiqado yar gudahood. Eygeyga ayaan cadayayaa laba jeer usbuucii walina wax badan ayuu daadiyaa. Waxaan ku noolahay cimilo diiran inkasta, sidaa darteed badankood ma daadin doono sanadka oo dhan sida tayda. Annagu ma xiirno isaga oo u nugul qorraxda oo si fudud u guban kara. Barkadda dhallaanka ee ku taal daaradda guriga ayaa ah wax walba oo ay qaadaneyso si aan Keeshond ugu faraxsanaado saacado badan xagaaga Alabama. Xannaaneynta ayaa u qalantaa maadaama aad ka heli doontid eeyga ugu qurxoon mid ka mid ah asxaabtaada runtiina waa eeygii ugu fiicnaa ee aan abid leeyahay.
Liiska eeyaha Keeshond ee la isku qaso
Dutch Barge Eyga
Dhoola cadee Dutchman
Keeshond waa xayawaan yar oo is haysta oo aad ugu eg eg awoowgiis, Samoyed . Indhihiisu waa dhexdhexaad iyo midab madow. Dhegaha waa kacsan yihiin, qaab saddex geesood leh oo madaxa kor loo saaray. Dabada ayaa dhererkeedu dhexdhexaad yahay waxaana lagu qaaday dhabarka. Xuubka waa dherer dhexdhexaad ah oo si fiican loogu dheelitiray dhakada. Cagaha ayaa u eg bisad, is haysta oo si fiican u wareegsan. Eeygu wuxuu leeyahay labadaba jaakad dheer oo toosan oo qallafsan, taas oo ku imaanaysa hooska midabka cawliga leh talooyin madow iyo jaakad qafiif ah oo hoose, taas oo ah kareem ama cirro cirro leh. Koodhka ayaa jidhka ka fog.
Saaxiibka carruurta ee aadka u fiican, firfircoon, caqli badan, aad u jecel oo baxa, Keeshonden waxaa ka buuxa shaqsiyad. Waa loo tababbari karaa inay wax qabtaan. Keeshond waa kalgacal iyo saaxiibtinimo, qof walbana wuu jecel yahay wuxuuna ubaahanyahay inuu kamid noqdo howlaha qoyska. Noocani waa dabeecad dhab ah oo dhakhso leh in la barto haddii milkiilayaasheeda ay iswaafajiyaan. Waa in lagu tababaro iyadoo la isticmaalayo hoggaan jilicsan, laakiin adag, deggan. Guud ahaan way ku wanaagsan tahay xayawaanka kale. Bulsho si fiican si looga fogaado inay noqdaan kuwo la ilaaliyo ama xishood leh. Keeshonden waxay jecel yihiin inay ciyo oo ay yihiin waardiyeyaal wanaagsan maxaa yeelay hadiyaddooda xusidda leh ee digniinta halista. Bar iyaga oo ku filan ayaa ku filan, si ay u joojiyaan qaylada ka dib markii ay qaylo-dhaantii ugu horreysay ee digniinta ah. Ka taxaddar in aad naas nuujiso, waayo Keeshond wuxuu culeyskiisu si fudud ku kordhin doonaa. Hubso inaad u qaadatid iyaga a socod baako maalinle ah si loo daadiyo tamarta maskaxeed iyo tan jireedba, si looga fogaado kor u qaadista xad dhaafka ah, sida wareegga wareegyada iyo wixii kale arrimaha dhaqanka . Keeshond oo wareegaya wareega wuxuu leeyahay tamar xad dhaaf ah oo uu ugu baahan yahay inuu gubo, jir ahaan iyo maskax ahaanba. Had iyo jeer noqo eeygaaga hogaamiyaha xirmada , adkaysi leh, kalsooni leh oo iswaafaqsan. Sii eyga sharciyada uu ku qasban yahay inuu raaco kuna xadido waxa uu yahay iyo waxa aan loo oggolayn inuu sameeyo. Eeyadu waxay jecelyihiin, oo si dabiici ah ugu baahan yihiin, nidaamka noocan ah noloshooda.
Dhererka: Ragga 17 - 19 inji (44 - 48 cm) Dheddigga ayaa 10% ka yar.
Miisaanka: ilaha qaar waxay yiraahdaan 55 - 66 rodol (25 - 30kg), halka kuwa kale ay leeyihiin 35 - 45 rodol (15 - 20 kg). Weydii soosaarahaaga heerka ay raacaan.
U nuglaanshaha dysplasia sinta, dhibaatooyinka maqaarka iyo cudurada wadnaha. Qaar ka mid ah Keeshonden oo leh qallafsanaan aan caadi ahayn, jimicsi aad u badan ayaa u horseedi doona jilib jilicsan inuu horumariyo.
Aqal ku hagaagi maayo, in kasta oo ay ugu yaraan waa inay lahaadaan daarad dhexdhexaad ah. Keeshonden waxay doorbidayaan cimilo qabow si fiican uma adkeysan karaan kuleylka sababtoo ah jaakadooda qaro weyn awgeed.
Noocan ayaa loo baahan yahay in lagu qaato a socod maalinle ah . Intaas waxaa sii dheer, waxay sidoo kale ku raaxeysan doonaan orod wanaagsan maalin ammaan ah oo furan. Noocani waa mid si firfircoon uga shaqeeya gudaha. Marka Keeshond ku wareego wareegyada waa calaamad wuxuu u baahan yahay jimicsi dheelitir badan. Eeg fiidiyowga fiidiyowga ee xiisaha leh Keeshond oo wareega wareega .
Aroosku ma aha mid dhib badan sidaad filan karto, laakiin cadayashada maalinlaha ah ee jaakadda dhaadheer ee burushka adag ee adag ayaa muhiim ah. Ku caday hadhuudhka marka hore, ka dibna timaha kor ugu qaado shanlo, hadhuudhka, kuna celi meeshiisa. Maydho ama shaambo qallalan oo keliya markii loo baahdo. Dharka cufan ee cufan ayaa si xoog leh loo daadiyaa sanadkiiba laba jeer guga iyo deyrta.
Keeshond wuxuu leeyahay asal ahaan asal ahaan. Qarnigii siddeed iyo tobnaad Keeshond waxaa loo yaqaanay 'eeyga dadka.' Xididdadiisa xididdada dhiigga Samoyed , Chow Chow , Spitz Finnish ah , Reer Nork Elkhound , iyo Pomeranian . Bilowgii Kacaankii Faransiiska, waxay noqotay astaamaha xisbiga siyaasadeed ee Dutch Patriot, oo uu hoggaaminayo waddani Kees de Gyselaer. Gyselaer wuxuu lahaa eey magaciisu yahay Kees, kaas oo magaciisa u bixiyay magaca. Taranka ayaa markaa la kulmay dayac dheer. Markii ugu horreysay waxaa soo gelisay UK Mrs. Wingfield-Digby dibna umay noqon kuwa caan ah illaa 1920, markii ay timid Mareykanka. Waxaa loo yaqaanay 'Dutch Barge Dog', maadaama ay u shaqeyn jirtay sidii waardiye iyo eey ilaaliya doonyaha wabiyada, doonyaha waaweyn iyo beeraha. Keeshond wuxuu AKC aqoonsaday 1930.
Kalla eeyga Keeshond ee 9 toddobaad
Mr. Jeeves, oo ah eey Keeshond ah oo jirta 5 bilood
Fletcher the Keeshond oo 10 jir ah
Eyga weyn ee Keeshond — Sawir waxaa iska leh David Hancock
Amanda the Keeshond oo jirta 15 sano ayaa dhulka la dhigeysa madow bisad hoos ka daawanaya korka kursiga jiifka
Zuza Punkt Widzenia iyada qashin eeyo yaryar , sawir iska leh Czech Republic Kennel Re-Jan Moravia
shaybaar madow iyo bulldog isku dhafan oo Mareykan ah
Haweeneyda Keeshond Zuza Punkt Widzenia oo ka socota aqalada Re-Jan Moravia iyo qashinkeeda eyda I .. Re-Jan Moravia
Interchampion Keeshond lab Akimm oo ka socda aqalka Re-Jan Moravia
Eeg tusaalooyin badan oo ah Keeshond
Keeshond Sawirada 1
Keeshond Sawirada 2
shaybaarka madow iyo iskudhafka caabuqa
shar pei pitbull cimri dhererkiisa
pictures of jilicsan dahaarka wanaagsan terriers
cabirka iyo culeyska jiirka